Sarkaal ka tirsan Milatariga Soomaaliya oo lagu dilay degmada Dharkeynlay. – Hornafrik Media Network
Sarkaal ka tirsan Milatariga Soomaaliya oo lagu dilay degmada Dharkeynlay.
Muqdisho-Hornafrik-Alle ha u naxariistii Waxa ay Ciidamo ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya degmada Dharkeynlay ay ku dileen Sarkaal sare oo ka tirsan Milatariga Soomaaliya kadib muran dhinaca dhulka ah oo ka taagan degmadaasi.
Marxuumka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdullahi Xuseen Maxamed Magiste waxaana la sheegay in ay toogtayn Ciidamada amaanka Soomaaliya kadib markii la sheegay in uu dilka marxuumka amray mas’uul ka mid ah maamulka degmadaasi.
Sarkaalka la dilay ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa Saraakiil tababar ka bixiya Xerada Nac Nac ee magaalada Muqdisho waxa uuna ka hor inta aan la dilin la murmay Ciidamo bur burin ka waday Xaafadda kaaba godey ee degmada Dharkeenlay
Sidoo kale 6 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay Isku dhacyada Ciidan ee ka dhacay Degmada Dharkenlay sida uu sheegay qof ka mid ah dadka deegaanka
Muqdisho kuma Cusba isku dhacyada Ciidanka waxaana maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay isku dhacyada nuucyadaan oo kale ah.
Mas’uuliyiinta degmada Dharkeenlay iyo kuwa Gobalka oo aan la xariirnay ayaa noo suurta gelin in aan helno si aan wax uga weydiino isku dhacyadaan sababay dhimashada Sarkaalka iyo dhaawac 6 qof oo kale.